Batrị sel Factory, Suppliers - China Batrị sel Manufacturers
Anyị na-enye nnukwu ụlọ ọrụ batrị dị elu ahịa 5000mah 3.7v li-ion 21700 batrị batrị dị elu na ọnụahịa ụlọ ọrụ.Shenzhen Polymer Battery Co. Ltd bụ ụlọ ọrụ batrị lithium na-ewepụta maka ụdị batrị niile dị ka 21700, 18650, 14500, 123A, 103450 , AA, AAA na ndị ọzọ. Ngwaahịa anyị kachasị gụnyere batrị Lithium, Ike ụgbọala, ikike nchekwa teknụzụ ụgbọ eletriki igwe eletriki na batrị ike, dabara adaba maka ọkụ eletriki ekwentị, ụgbọ ala, nche. ego, nkwado ndabere na mpaghara ndị ọzọ.
High arụmọrụ anyanwụ nchekwa EV ike mgbidi 3.2v 50ah rechargeable prismatic lifepo4 batrị cell
Anyị na-enye elu mma elu arụmọrụ anyanwụ nchekwa EV ike mgbidi 3.2v 50ah rechargeable prismatic lifepo4 batrị cell. Ahaziri mmepe, factory kpọmkwem ahịa, ika batrị, nchedo osisi onwe nnyocha na mmepe, ụlọ ọrụ ahụmahụ, tozuru okè ma mụ mmepụta usoro.We enye elu-edu LFPO4-1 Battery ndị ahịa n'ụwa nile na-enyere ahịa anapụta batrị si China ka ha site n'oké osimiri na ikuku na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Anyị na-ewetara gị nkwado nkwado ọrụ na akwụkwọ ikike maka gị!
PLM 3.2v 280Ah Prismatic LiFePO4 LFP Lithium Battery Cell maka EV, Mbara ala usoro nchekwa nchekwa
Anyị na-enye ezigbo batrị 3.2v 280Ah Prismatic LiFePO4 LFP Lithium Cell maka EV, Solar sistemụ ume ọkụ usoro. bụ ọkachamara emeputa àjà nnyocha, mmepe, mmepụta, na ahịa ọrụ nke lithium ion batrị cell, na batrị Ukwu. Anyị na-emepụta ma rụpụta batrị na sel ndị a na-emebu maka mkpa ụfọdụ. Ngwunye batrị lithium lifepo4 ahaziri nke 3.2V-96V, 5AH-280AH, nke enwere ike iji ya na RV, EV, Solar system, E-bike, UPS, usoro nchekwa ike, ebe nkwukọrịta telefon, E-skooter, E-tool, golf. ụgbọ ala, ndụdụ, ụgbọala nhicha, oche nkwagharị eletrik, na ngwa okirikiri ndị ọzọ.
Batrị Lithium Ion Lifepo4 100ah 3.2v Lifepo4 Batrị sel Mbara Igwe Ntanetị Oche batrị batrị ike ụlọ.
Anyị na-enye ezigbo batrị Lithium Ion Lifepo4 100ah batrị 3.2v Lifepo4 Batrị Mkpụrụ ndụ Mbara Igwe Ntanetị batrị batrị ụlọ na-enye ike. Dabere na sel batrị LFP dị iche iche, nwere ike ịkwadebe skru, asher na plates .Mgbe anyị bụ ụlọ ọrụ batrị, anyị na-enye nhazi OEM / ODM, na-abụghị ike, nha, nwekwara ike ịkwadebe akụkụ niile ịchọrọ maka ọrụ gị. ịkpọtụrụ anyị mgbe ịchọrọ batrị.
Anyị na-ewetara batrị lithium batrị a na-ewepụta batrị maka ngwa ahịa 26650 3.7v 5000mah batrị wuru n'ime BMS.Shenzhen Polymer Batrị Co. Ltd bụ ụlọ ọrụ batrị lithium batrị maka ụdị batrị niile dị ka 26650, 21700，18650, 14500, 123A, 103450 , AA, AAA na na na. Ngwaahịa anyị kachasị gụnyere batrị Lithium, Ike ụgbọala, ikike nchekwa teknụzụ ụgbọ eletriki igwe eletriki na batrị ike, dabara adaba maka ọkụ eletriki ekwentị, ụgbọ ala, nche. ego, nkwado ndabere na mpaghara ndị ọzọ.
Factorylọ ọrụ batrị na-ere 3.7v li-ion 18650 batrị batrị batrị lithium nwere ike ịrụ ọrụ dị elu
Anyị na-enye nnukwu ụlọ ọrụ batrị dị elu nke na-ere 3,7v li-ion 18650 batrị batrị nwere ike ịrụ ọrụ batrị lithium. Shenzhen Polymer Battery Co. Ltd bụ ihe nrụpụta lithium batrị na-ewepụta maka ụdị batrị niile dị ka 18650, 18650, 14500, 123A, 103450, AA, AAA na na. Ogo PLM na-ezute CE, ROHS, SGS, UN38.3 na MSDS Standard. Anyị factory nwere 10,000 square mita nke ala, anyị nwere ike tụgharịa si 2,000,000 PC batrị na 1,000,000pcs batrị chaja kwa ọnwa. Anyị na-ekwenyesi ike na ISO 9001: 2008 iji nye gị ngwaahịa dị elu na otu R&D ọkachamara, ndị ọrụ nwere ahụmahụ na akụrụngwa dị elu. A na-ahụta akara ngosi PLM dịka nnọchi anya nke ọtụtụ ndị ahịa na ụlọ anyị na ndị mba ọzọ.
Anyị na-enye ogo dị elu CB UL Nkwado 18500 1500mAh 3.7V ion batrị lithium Shenzhen Polymer Battery Co. Ltd bụ onye na-emepụta batrị lithium, batrị ọkụ ọkụ, batrị oriọna ndị na-egwupụta ọkụ, batrị ọdịyo, batrị ọkụ ọkụ, batrị egwuregwu ụmụaka na ngwaahịa ndị ọzọ dịka ndị na-esonụ ụdị 18650, 18500, 14500, 123A, 103450, AA, AAA na na na anyị ụlọ ọrụ bụ a mbara elu-tech ụlọ ọrụ tụnyere ihe R&D, mmepụta na ahịa. Companylọ ọrụ anyị nwere ikike ọrụ ike siri ike ma na-agbasi mbọ ike na omenaala. Ọganiihu nke ndị ahịa anyị bụ ihe ịga nke ọma anyị. Anyị nwere nlezianya ịchịkwa akụrụngwa, usoro mmepụta na ngwaahịa. Anyị nwere ọtụtụ uru dị ka ịwepu akwa na nkwụsi ike. Anyị nwere aha dị elu na ụlọ ọrụ. "Imekọ ihe ọnụ na mmepe ọnụ bụ mmụọ anyị na - arụkọ ọrụ oge niile. Mmasị ndị ahịa bụ ebumnuche Anyị bara uru maka ndị na - ebubata ya na ndị na - ekesa ya! Anyị na-agbaso ụkpụrụ ụlọ ọrụ nke iguzosi ike n'ezi ihe, arụmọrụ na ihe ọhụụ ma jikọta mmepe nke mkpa na ọrụ. Kpebisiri ike ịbụ onye J.Randall enterprise na mobile ike ndst, "mmepụta. Na-ere ahịa. Anyị ga-aga n'ihu na-ewusi usoro ọrụ nke ndị ahịa nyocha pụrụ iche na-ebuga batrị sitere n'aka China n'oké osimiri na ikuku site na ọnụahịa dị mma. Anyị na-ewetara gị nkwado nkwado ọrụ na akwụkwọ ikike maka gị!
3.2v Elu ọnụ voltaji 10ah elu ọnụ Nwere ikike headway 40152S 15ah 3.2v lifepo4 ụgbọ ala batrị mkpụrụ ndụ
Anyị na-enye ezigbo ikike 3.2v Nominal Volta 15ah Nominal ikike ikike ụzọ 40152S 10ah 3.2v ndụ batrị ụgbọ ala eji eme ihe na ọkụ ọkụ, ọkụ Street, mkpọ batrị, nchekwa anyanwụ, Cargbọala eletriki, ezé ezé, batrị Mouse, ọkụ ọkụ na ngwa ndị ọzọ dabara adaba.40152S akụkụ batrị batrị dị elu na ezigbo ikike, na-ekwe nkwa ịghara iji ihe dị ala. Anyị na-enye ndị ahịa nọ ebe dị elu 40152S batrị ma na-enyere ndị ahịa aka ịnyefe batrị sitere na China site n'oké osimiri na ikuku site na ọnụahịa dị mma. Anyị na-ewetara gị nkwado nkwado ọrụ na akwụkwọ ikike maka gị!
3.2v Elu ọnụ voltaji 10ah elu ọnụ Nwere ikike headway 38120 10ah 3.2v lifepo4 ụgbọ ala batrị mkpụrụ ndụ
Anyị na-enye ogo dị elu nke 3.2v Nhọrọ Voltage 10ah Nkọwa Ike Isi 38120 10ah 3.2v lifepo4 sel batrị ụgbọ ala ejiri na ọkụ ọkụ, ọkụ Street, mkpọ batrị, nchekwa ọkụ, ọkụ eletrik, Egwuregwu ezé eletriki, batrị Mouse, Flashlight na ngwa ndị ọzọ kwesịrị ekwesị. 381120 sel ndị nwere akụkụ batrị dị elu nwere ezigbo ikike, kwere nkwa ka ha ghara iji ihe ndị dị ala. Anyị na-enye ndị ahịa niile batrị dị elu 38120 dị elu ma nyere ndị ahịa aka ịnapụta batrị site na China na ha site n'oké osimiri na ikuku na ọnụ ahịa ezi uche. Anyị na-ewetara gị nkwado nkwado ọrụ na akwụkwọ ikike maka gị!
LiFePO4 6000mAh 3.6V Mgbaze Mgbapụta IFR 32650 Batrị Mgba
Anyị na-enye ezigbo ihe dị elu Deep Cycle LiFePO4 6000mAh 3.2V Njiji batrị IFR 32650 batrị eji ọkụ, ọkụ Street, mkpọ batrị, nchekwa anyanwụ, Cargbọala eletriki, ezé ezé ezé, batrị Mouse, ọkụ ọkụ na ngwa ndị ọzọ kwesịrị ekwesị.32650 selbattery seltery ezigbo ikike, kwe m nkwa iji ihe dị ala dị elu. ụlọ ọrụPLPL elebara anya na batrị lithium na ọrụ chaja ihe karịrị afọ 6. Batrị Lithium na chaja agafeela ọtụtụ nnwale mba ofesi, dịka UL, CE, RoHs, UN38.3, MSDS , FCC, etc.PLM ụlọ ọrụ arụkọ ọrụ ọnụ na ọtụtụ ndị na - ekesa ya n'ọtụtụ mba, dịka USA, CA, UK, France, Italy na ndị ọzọ.OEM. Ọrụ ODM dị. Mmadụ Bịa kpọtụrụ anyị ọ bụla! HK nkwakọba mbubata batrị si Japan na Korea ozugbo. Ọnụahịa kacha mma na nkwa 100% batrị mbụ.
Ihe E Dere Ngwaahịa: Batlọ ọrụ batrị ozugbo ana-achagharịrị AAA 1000mah Ni-mh 1.2v batrị Ngwaahịa batrị PLM-1.2V Ngwa: Obere ụgbọ ala, ihe egwuregwu eletriki, mkpọ batrị, nchekwa anyanwụ, Cargbọala eletriki, ezé ezé elektrik, batrị Mouse, ọkụ ọkụ, Ime akara wdg Quality nkwa 1, Professional Production 2, Professional Testing 3, Factory N'ogbe 4, OEM / ODM Welcome New A ọkwa ngwaahịa, anụ arụmọrụ, ezigbo ikike, mma na inogide egweri chaja ...